इसाई गीत | के तिमी परमेश्‍वरको नाउँ कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन भनेर जोड दिने आँट गर्छौ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
केहीले भन्छन्, परमेशवरको नाउँ परिवर्तन हुँदैन।
अनि त्यसो भए यहोवेको नाउँ किन येशू भयो त?
मसीह आउनुहुन्थ्यो भनी भविष्यवाणी गरिएको थियो,
त्यसो भए किन येशू नाउँ गरिएको मानिस आउनुभयो त?
परमेश्‍वरको नाउँ किन परिवर्तन भयो?
के यस्ता काम धेरै पहिले कार्यन्वायन गरिएको थिएन?
के परमेश्‍वर आज नयाँ काम गर्न असक्षम हुनुहुन्छ?
हिजो गरिएको कामलाई बदल्न सकिन्छ,
र येशूको काम यहोवाको कामको परिणामस्वरूप हुन सक्छ।
त्यसो भए, के येशूको कामपछि अरू काम आउन सक्दैन र?
यदि यहोवाको नाउँ येशूमा परिणत हुन्छ भने,
येशूको नाउँ पनि परिवर्तन हुन सक्दैन र?
यी कुनै पनि अनौठो कुरा होइनन्;
मानिसहरू मात्र सिधा-साधा छन्।
परमेश्‍वर सदैव परमेश्‍वर नै हुनुहुनेछ।
उहाँको काम जति परिवर्तन भए पनि,
र उहाँको नाउँ जति परिवर्तन भए तापनि,
उहाँको स्वभाव र बुद्धि कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन।
यदि परमेश्‍वरलाई येशूको नाउँद्वारा मात्र पुकार्न सकिन्छ भनी तपाईंले विश्‍वास गर्नुहुन्छ भने,
तपाईंको ज्ञान अत्यन्त सिमित छ।
के तपाईंले परमेश्‍वरको नाउँ सदासर्वदा येशू नै रहनेछ
र परेमश्‍वरलाई सदासर्वदा र सदैव येशूको नाउँले पुकारिन्छ भनी
निश्‍चय गर्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ?
येशूको नाउँले नै व्यवस्थाको युगको अन्त गर्‍यो र अन्तिम युगलाई पनि यही नाउँले नै अन्त गर्नेछ भनी
के तपाईंले निश्‍चयताका साथ पक्का गर्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ?
येशूको अनुग्रहले नै युगलाई अन्ततिर ल्याउन सक्छ भनी कसले भन्न सक्छ?